Starbucks oo markale la dhacay, wakhtiga la furayana la beddelay -
Starbucks oo markale la dhacay, wakhtiga la furayana la beddelay
Kadib markii la dhacay dhawr meelood oo ah ganacsiga Starbucks-ka ayaa maamulka u qaabilsan shirkadda Starbucks gobolka Minnesota go’aan ku gaareen in ay badalaan wakhtiga la furo afar meelood oo ku kala taala magaalooyinka, Minneapolis, Richfield iyo St. Louis Park. Meelahan dhaca loo geeystay ayaa waxaa la hadda kadib la furi doonaa 8:00 aroornimo, halka markii hore laga furi jiray saacadu marka ay tahay 5:30 aroornimo.
Qaar kamid ah goobahan ganacsi ee ay leedahay shirkadda Starbucks ayaa waxaa loo geeystay dhacitaan iskugu jira lacag iyo waliba hanti kaleba. Wakhtiga subaxa hore ah ee la furo albaabada goobaha ganacsigan ayaa noqday mid ay ka faa’iidaystan dadka dembiyada dhaca ah u geeystay ama la beegsaday Starbucks.
Haddaba waxaa mudan in la xuso in afarta meel ee loo geeystay dhaca ay intooda badani ay yihiin meel ay aad u isticmaalaan Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota, gaar ahaan labadda magaalo ee mataanaha ah iyo xaafadaha nawaaxigooda ah.
Madaxda ciidanka booliiska ee magaalada St. Lous Park ayaa sheegaya in dhac hubaysan loo geeystay maalintii Khamiista, bishuna ahayd, 01-19-2017, subaxnimadii hore, saacaduna ku aadaneyd 5:30 aroornimo.
Sida laga soo xigtay Afhayeen u hadlay Waaxda Booliska Park St. Louis a, waxaa Starbucks-ka dhacay labo nin oo ku hubaysan baskoolad. Dad markii uu fal danbiyeedkani dhacay goobjoog ahaa ayaa sheegay in nimanka wax dhacay ay dalbadeen lacag.
Haddaba lama hayo dadkii dhacan geystay. Waaxda Boliiska St. Louis iyo Hennepin County Sheriff ayaa iyagu baaraya dhaca loo geeystay ganacsiga Starbucks.
Xigashadda sawirka: the truth about guns
Related Items:Featured, local, News, Somali community, Somali Minneapolis
I am Somali American Muslim, I Voted for Trump and I am attending the inauguration
Young activist AK Hassan to run for Minneapolis Park and Recreation Board Commissioner